ထိပ်တန်း 14 ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ - လိမ်လည်လှည့်စားသောချီတာကိုဖမ်းဆီးရန် OMG Solutions
ထိပ်တန်း 14 ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ - Cheater Red-Handed
မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကမင်းကိုလှည့်စားနေတဲ့လိမ်လည်သူလို့သင်ထင်ရင်မင်းရဲ့ cheat partner ကိုအနီရောင်ဝတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ လှည့်စားခြင်းမိတ်ဖက်များကိုကမ္ဘာအနှံ့တွေ့ရှိပြီးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏မျက်မြင်သက်သေကိုစွန့်ခွာသွားပြီးသစ္စာမဲ့ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလားတူအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါကစိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏လက်တွဲဖော်ကို Hidden Camera, Voice Recorder နှင့် GPS Trackers ကဲ့သို့သောခေတ်မီနည်းပညာများ၏အကူအညီဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ ဒီမှာနှိပ်ပါ။ အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ခေတ်သစ်နည်းပညာကိုသုံးခြင်းကသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်စေသည်။ သူ၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်ဖတ်ပြီးသူ၏နိဂုံးချုပ်အားကြည့်ရှုရန်သူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်၏သဘာ ၀ ကိုယုံကြည်ရန်နှင့်အတွင်းလူစုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောသံသယရှိသောလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုရှာဖွေခြင်းအပြင်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ မင်းရဲ့လျစ်လျူရှုမှုဟာမမှန်ဘူးဆိုတာကိုသင်နားလည်စေတဲ့ 'လျစ်လျူရှု' တဲ့အမှတ်အသားများစွာရှိပါတယ်။ သင်၏သဘောသဘာဝအပေါ် မူတည်၍ ပြသနာကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း၊ သင်၏အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ ဦး စွာဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန်ဤ 14 နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
ပထမ ဦး စွာသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလိမ်သည်ဟုထင်လားဟုသင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။ သင်စကားပြောခြင်းနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုကိုဖယ်ရှားရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ သင်ဤနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုခုကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေနိုင်သည်။ သူသည်သူမလိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ကိုရှာဖွေလိုသည့်သင်၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူထံမှခိုင်လုံသောအဖြေတစ်ခုရရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ နည်းတစ်နည်းမှာသင်၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်အားအမှတ်အသားများကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန်ဖြစ်စေသူလျှိုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသုတေသနကိုကောက်ယူပြီး 14 နည်းလမ်းများဖြင့်လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင့်အားအမှောင်ထုထဲမ ၀ င်စေပါနှင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်သူ့အတွက်များစွာသောအရာများကိုပေးဆပ်ခဲ့သည့်သင်၏နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် 14 ၏လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းကိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြနေကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များသည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောမိတ်ဖက်ကိုပိုမိုသိရှိရန်ကူညီလိမ့်မည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
1 ။ လှည့်စားသူများကမ္ဘာတဝှမ်းတည်ရှိ:
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ထူးထူးဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်မယုံကြည်မှုပြုမူနေသည်၊ သို့မဟုတ်သူ၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တစ်ခုကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ ဆိုင်းဘုတ်များနေရာတိုင်းမှာတကယ်တော့ဖြစ်ကြသည်။ သူဟာပိုကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေ ၀ တ်နေပြီလား၊ အားကစားလုပ်ဖို့အားကစားရုံကိုစပြီးတက်တာလား၊ စာသားနဲ့ WhatsApp စာတိုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရယူနေတာလားဆိုတာကိုသင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလက်ရှိသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိမ်လည်လှည့်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်ကြောင်းအခြေခံနိမိတ်လက္ခဏာများပါ၏ သို့သော်၎င်းတို့သည်လိမ်လည်လှည့်စားသည့်လက္ခဏာများအဖြစ်နားလည်နိုင်သောချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကိစ္စဟာသိသာထင်ရှားပြီးအလေးအနက်ထားတဲ့အတွက်အမှားတွေမလုပ်မိအောင်သတိမပြုနဲ့သူဟာနိဂုံးချုပ်မလာခင်သင့်ကိုလှည့်စားနေတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဆိုင်းဘုတ်ကိုရှာပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ခင်ပွန်းနှင့်တကယ့်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းခြင်းသည်ဤကိစ္စများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
2 ။ ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှု:
လူတိုင်းတွင်သူသည်နေ့တိုင်းမသိစိတ်ဖြင့်လိုက်နာရမည့်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်အလုပ်ပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်ရန်မပြောင်းလဲသောအစီအစဉ်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်ရုံးသို့မမျှော်လင့်ဘဲအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်အားဖိတ်ကြားထားခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏မွေးနေ့သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပရန်အချိန်ရှာလျှင်သူသည်လိမ်လည်လှည့်ခင်ပွန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ။ ကင်းလွတ်ခွင့်များရှိသော်လည်းလှည့်စားသူများမှာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားလျှင်တရားမျှတမှုကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
3 ။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း:
လူ့ခန္ဓာကိုယ်များသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအရလုပ်ဆောင်သည်။ တကယ်တော့ခင်ပွန်းသည်ကသင့်ကိုလိမ်ညာနေတယ်ဆိုရင်ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ကနေနှောင်းပိုင်းအထိနိုးထလာမှာဖြစ်ပြီး၊ အိပ်ချိန်၊ အိပ်ချိန်၊ အိပ်ရာထခြင်းစတာတွေဟာသူမအဖော်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၊ နံနက်ခင်းအထူးသဖြင့်ဖုန်းနားချိန်အတွက်သူဟာလိမ်လည်သူဟုညွန်ပြသည့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသတိထားရမည်။
4 ။ သင့်ပါတနာ၏ကွန်ပျူတာ၏အမှိုက်ပုံး
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အပြုအမူကိုသင် မကျေနပ်၍ သူသည်သင့်အားလိမ်လည်နေသည်ဟုသင်ခံစားရလျှင်၎င်းကိုနှစ်သက်သောသူ၏ဓာတ်ပုံကိုသူ၏ကွန်ပျူတာတွင်လျှို့ဝှက်ဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျပန်းဖိုင်အမည်အောက်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်သူ၏ကွန်ပျူတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါကရုပ်ပုံ (သို့) နေရာတကာရှိအရာများကိုရှာဖွေရန်၊ ပယ်ဖျက်လိုက်သောဖိုင်များအားလုံးမပျောက်မချင်းစုဆောင်းထားသည့် Recycle Bin အတွင်း၌ပင်ရှာဖွေပါ။ ဤသည် cheater အထောက်အထားနှင့်အတူ cheater ဖမ်းရန်နည်းပညာမှအကျိုးကျေးဇူးကိုယူ၏အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ PC ၏လျှို့ဝှက်ဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ YouTube သို့မဟုတ် Google ကို သုံး၍ သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သင်လုပ်နိုင်သည်။
5 ။ လှည့်စားနေသောခင်ပွန်းသည်ကသူ့ဖုန်းကိုများသောအားဖြင့်ဖုံးကွယ်လေ့ရှိသည်။
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏ကြင်ဖော်ကသူ့ဖုန်းကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်တိကျခိုင်မာသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သူဟာဖုန်းကိုသင့်နေရာတိုင်းမှာယူသွားခြင်းအားဖြင့်တစ်နေရာရာကိုမလှုပ်ဘဲမသွားဘဲနေခြင်းအားဖြင့်ဖုန်းကိုသင့်ထံမှဝေးကွာသွားအောင်ကြိုးပမ်းတာကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ သူ၏ဖုန်းကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သူ့ဖုန်းမှတ်တမ်းများ၊ WhatsApp၊ Facebook နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်မသမာသောသို့မဟုတ်သိသာသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်၎င်းအားအနီရောင်လက်ဖြင့်ဖမ်းရန်သူသည်သူမ၏လိမ်လည်လှည့်စားသူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် အဆုံး။
6 ။ သူ၏အကျင့်ဓလေ့ပြောင်းလဲမှုများ -
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်စတိုင်လ်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ဖက်ရှင်မဟုတ်ပါကသူသည်သူ၏ခြေဆွံ့သူများဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုရုတ်တရက်စွန့်ပစ်ပြီးအဝတ်အစားအသစ်များနှင့်ယဉ်ကျေးသောရေမွှေးများ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ အားကစား၊ ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုသည်လိမ်လည်လှည့်စားသူနှင့်အမြဲတမ်းဆက်စပ်မှုမရှိပါ၊ သို့သော်မမျှော်လင့်သောအပြောင်းအလဲများကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင့်အားလှည့်စားနေသည်ဖြစ်စေမဖော်ပြသည်ကိုများစွာဖော်ပြနိုင်သည်။ မယုံကြည်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုအနီးကပ်လေ့လာပါ။
7 ။ အိမ်တွင်းရန်တွေ့မှု:
မမျှတသောဆက်ဆံရေးများနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုရှိခြင်းသည်သူနှင့်သင်နှင့်စကားများရန်ဖြစ်ပြီးနောက်အိမ်မှထွက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူသည်သူမချစ်သူကိုတွေ့မြင်ရန်ဒေါသဖြင့်အိမ်မှထွက်သွားလိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးများစွာကသူတို့၏ခင်ပွန်းများမကြာခဏစကားများရန်ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သာထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ပါကသူမဖမ်းမိပါကရန်ဖြစ်မှုအတွက်တောင်းပန်ရန်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်သူ၏တည်နေရာကိုသိရန်သူ့ကိုနောက်လိုက်ရန်လိုအပ်သည့်သူလျှိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါ။
8 ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ အသုံးပြု၍ လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းကိုဖမ်းယူပါ။
သင်၏ cheat partner ကိုဖမ်းရန်၊ မည်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမဆိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင့်အားလိမ်လည်သည်ဖြစ်စေ၊ မမှန်သည်ကိုသက်သေပြရန်နည်းပညာနှင့်ကိရိယာများကို သုံး၍ ၎င်းကိုဖွင့်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် WhatsApp နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုအလွယ်တကူဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူ၏ WhatsApp စာများကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Backuptrans Android WhatsApp transfer ကိုစာဝှက်ဖြည်နိုင်သော software အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။
9 ။ အလိုအလျောက်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်ဖြင့်အနီရောင်လက်ကိုင် Cheater ကိုဖမ်းယူပါ။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏စမတ်ဖုန်းတွင် Facebook၊ WhatsApp သို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖွင့်ပါ၊ ရှာဖွေရန်ရွေးစရာ option တွင်အမည်တစ်ခုသို့မဟုတ်စကားစုအချို့ကိုရိုက်။ ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြည့်ပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဤရှာဖွေမှုများကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအချက်များမှာသင်သည်ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာများမှသိရှိပြီးတန်ဖိုးရှိသည့်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းအားသူမလက်ကိုဖမ်းရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
10 ။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအတုနှင့်အတူအနီရောင်လက်ကိုင် Cheater ကိုဖမ်း:
Facebook သို့မဟုတ် WhatsApp တွင်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်အတုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အကောင့်အတုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ ယခုသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုသူကလှည့်စားသည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်စကားပြောနိုင်သည်။ သူ့ကိုသင်အထူးခံစားမှုရှိစေရန်နှင့်သူနှင့်သင်မျှဝေမည်မဟုတ်ကြောင်းဖုံးကွယ်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေရန်သူနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေရန်ပြောဆိုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ပရိုဖိုင်းအတုတစ်ခုဖြင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်သူသည်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုပါကအလွန်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်။ WhatsApp တွင်အတုနံပါတ်အတုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်အတုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်တူညီစွာအကျိုးရှိသည်။
11 ။ Cheater ကိုဖမ်းရန် Hidden ကင်မရာများကိုသုံးပါ။
သင်၏ပင်ကိုအသိစိတ်ကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်လိမ်လည်လှည့်စားနေသည်ဟုသင့်အားအသိပေးပါကသူပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အိမ်၌ဝှက်ထားသောကင်မရာ၏အကူအညီဖြင့်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ အကယ်လို့မိုက်ခရိုဖုန်းတပ်ဆင်ထားရင်ဖုန်းပြောလိုက်တာတောင်သင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်သူ၌ရှိသည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်သူနှင့်သင်မရှိသောအခါသူပြုလုပ်သောအရာများအပေါ်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ သူလျှိုဘောပင်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်အခြားကောင်းသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်၏ရုံးခန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိရန်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောမည်သည့်ရုံးခန်းအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမဆိုသင်ယူရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်အလားတူနှစ်များအတွင်းဆက်ဆံရေးများစွာပျက်စီးခဲ့သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုခြေရာခံလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကို ရယူ၍ အသေးစိတ်အတွက် link သို့သွားနိုင်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
12 ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်နှင့်သူ့ကိုလက်ဖြင့်ဖမ်းရန် GPS Tracker ကိုသုံးပါ။
မသင်္ကာဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူရှိသောသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြောင့်သင်စိတ်ပူပါသလား။ GPS ချစ်ပ်များနှင့်ကိရိယာများကသင့်တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သူ့ကားသို့မဟုတ်ဖုန်းကိုကပ်ကပ်နိုင်သည့်သေးငယ်သော GPS ကိရိယာများနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်များမြောက်များစွာရှိသည်။ GPS Tracker ဆိုတာဘာလဲ။ တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏တည်နေရာကို GPS လမ်းကြောင်းမှရှာဖွေခြင်းသည် Global Positioning System (GPS) ကို အသုံးပြု၍ တည်နေရာကိုစောင့်ကြည့်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်နေရာစနစ်၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသည်လောင်ဂျီတွဒ်၊ လတ္တီတွဒ်၊ လမ်းကြောင်းနှင့် ဦး တည်ရာ၏ပစ်မှတ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဂျီပီအက်စ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုမြေပုံပေါ်တွင်သင်ခြေရာခံနိုင်ပြီးသူသည်ရုံးအပြင်ဘက်ရှိသူ၏အချိန်အများစုကိုအမှန်ပင်သုံးနေသည့်နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသူအားပွဲချင်းပြီးဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ။ သင်သည်သင်၏ခင်ပွန်းကိုမျက်မှောက်ခေတ်နည်းပညာ၏အကူအညီဖြင့်စောင့်ကြည့်လိုပါကသူ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များမှအကျိုးရယူနိုင်သည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်စူးစမ်းဘို့။
13 ။ check-ins များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများမှတဆင့်သူ့ကိုမှတဆင့်ဖမ်းယူ:
Social Media ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သောလူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ဓာတ်ပုံများနှင့်အမှတ်တရများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သူတို့၏တည်နေရာကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်လတ်တလောရုပ်ရှင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်သင်ခြေရာခံနိုင်သည့်အရာအားလုံးအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုထားသည့်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိမ်လည်မှုဟုတ်မဟုတ်သက်သေပြရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန် Facebook ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးမီဒီယာများအုပ်ချုပ်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံးကို ၀ င်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတင်ထားလေ့ရှိသော်လည်းသူသည်လိမ်လည်လှည့်ပါကသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ရှောင်ထွက်သွားနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်သူမသွားရောက်ဖူးသောစားသောက်ဆိုင်၏ရုပ်ပုံကိုသင်မသိသူတစ် ဦး ဦး နှင့်အကြိမ်များစွာအကြိမ်ကြိမ်သွားခဲ့ပြီးသင်မပါဘဲရုပ်ရှင်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှစ်ယောက်နှင့်ပbetweenိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လေကိုရှင်းလင်းရန်သင်မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သူသည်လိမ်သည်၊ မဟုတ်သည်ကိုသင်အဖြေရှာရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
14 ။ ဆက်သွယ်ရန်သူလျှိုအသုံးပြုခြင်း။
အဆက်အသွယ်ကိုအခြားအမည်အောက်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆိုရန်လွယ်ကူသည်။ ဥပမာ၊ Annie အစား 'David' ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်သူမပြုလုပ်မီခေါ်ဆိုမှုတိုင်းကိုသင်မပြောလျှင်သူသည်ဖမ်းမိခြင်းမရှိဘဲကစားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် ။ ၎င်းသည်သူလျှိုအဆက်အသွယ်များ ၀ င်ရောက်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အငြင်းပွားဖွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဖုန်းမှတ်တမ်းများကိုအထွက်နှင့်အဝင်နှင့်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် လက်ရှိတွင်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် app ကို download လုပ်ပြီးသင်၏ cheat partner ၏နံပါတ်ဖြစ်သောသတ်မှတ်ထားသောဖုန်းနံပါတ်ကိုသိမ်းထားပါ၊ ပြီးနောက်သင်စောင့်ကြည့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကပြုလုပ်သော (သို့) လက်ခံသည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်လက်တွဲဖော်၏ဖုန်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးဖုံးကွယ်ထားခြင်းက ပို၍ အကျိုးရှိသည်ဖြစ်သော်လည်းသင်ပြုလုပ်သော (သို့) လက်ခံရရှိသောခေါ်ဆိုမှုများကိုသင်နားထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သူ၏မရှိခြင်း၌သင်တို့၏လိမ်မိတ်ဖက်။
4567 စုစုပေါင်း Views စာ 24 Views စာယနေ့တွင်